Solid Dosage Solution Fekitori | China Solid Dosage Solution Vagadziri uye Vatengesi
Z akateedzana Capsule Kuzadza Machine
Z akateedzana capsule yekuzadza muchina yakanyatso gadzirirwa yekuzadza zvinodhaka zvemakomputa akaomarara, uye akasiyana mamodeli emachina anowanikwa. Inoshandiswa zvakanyanya kuzadza mhando dzakasiyana dzemishonga nekuda kwayo kwakawanda-chinangwa, basa rakakwana, kuita kwakavimbika uye kuzadza kwakakwana. Iyo ine yakasarudzika dhizaini uye inogona kupedzisa iyo yakavhenganiswa kuzadzwa kwemarudzi akasiyana emishonga mune imwecheteyo capsule.
S Series Piritsi yekudhinda muchina
S yakateedzana piritsi yekudhinda muchina yakagadzirirwa kupa inoshanda piritsi yekutsikirira mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi. Kugadzikana kwayo uye kuvimbika kunozivikanwa muindasitiri, uye mashandiro ayo ari nyore, inoshanduka kudzora uye otomatiki inorumbidzwa zvakanyanya. Panguva imwecheteyo, inogona kupa mahwendefa maviri-mahwendefa uye mapiritsi e-effervescent mhinduro, ichipa vashandisi mhando dzakasiyana-siyana dzekutsikirira mapiritsi.
G Series bemhapemha Midziyo
G akateedzana unhani muchina unogona kugadzirisa chero chimiro uye saizi yezvigadzirwa, uye ndicho chakakodzera michina yemafirimu unhani wemapiritsi, kupfeka kwemafirimu kwemapiritsi madiki, shuga yekupfeka, pellets kupfeka uye kuisa. Iyo yepamutemo yekuomesa system inogona kuvandudza zvakanyanya kuomesa kushanda uye mhando chigadzirwa.
P Series Perforated bemhapemha Midziyo
P yakateerana perforated unhani muchina ndeye yepasi-kirasi chigadzirwa icho chinotora yazvino yekumhanyisa tekinoroji. Inobatanidza zvakanakira ese ekumachina michina mumusika uripo wepasirese uye inosangana nezvinodiwa zvechizvino zvemakambani ekugadzira muchina nekutsvaira, izvo zvinogona kuwana kugadzirwa kwakazara kwakazvimiririra, kudzikisa kubudiswa kwezvinhu zvinoshanda uye kuwedzera kuchengetedzwa kwevashandi.
Dry granulator imhando yezvakatipoteredza kuchengetedza midziyo ine yakaderera investimenti, yakanyanya kushanda, simba kuchengetedza uye hapana kusvibiswa. Maitiro ekuumbana, kuumba, kupwanya uye granulator yezvakaomeswa zvidimbu neyakagadziriswa extrusion inoitwa nekushandisa iyo crystalline mvura yechinhu icho pachayo.
LGL Series Fluid Bhedha Dhivha
mvura yemubhedha yakaoma inogona kuchinjwa nekukurumidza uye zvakasiyana, iyo inogona kusangana zvirinani nezvinodiwa zveGMP. Fluid bed bed dryer inosvika kusvika pa12 bar, ATEX inoenderana, inogona kupihwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.